आन्दोलनकारी ल्याउने बसहरू खोई ? - युगपत्र
✍️ युगपत्र संवाददाता	 📅 १९ बैशाख २०७८, आईतवार १६:१२ 334
एउटा गुट संसद विघटन गरेर शक्ति र सत्ताको उन्मादमा थियो । अर्को गुट संसद विघटन विरुद्ध सडकमा “हामी यहाँ छौं” भनेर पोस्टर छातीमा टाँसेर सडकमा थियो । एक अर्कालाई आफ्नो पक्षमा कति मान्छे छन् देखाउनुथियो । गाउँ गाउँबाट एसी वाला बस, डिलक्स वाला बस घरघर पुर्याएर मान्छे काठमाडौँ उतारियो।
मोहन लामा रुम्बाले हिसाब निकालेका छन् – एउटा गुटले आमसभामा मान्छे उतार्न चितवन जिल्लाबाट मात्रै २०५ वटा बस रिजर्भ गरिएको रहेछ जसको खर्च मोटामोटी एक करोड निकालेका छन् । चितवन भन्दा टाढा टाढाका जिल्लाबाट मान्छे ल्याउन झनै महँगो पर्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले भाषण गरे खड्गप्रसाद ओली खत्तम हो । सर्वसाधारणले भाषण सुने । ताली बजाए । खड्गप्रसाद ओलीले आमसभा भन्दै मान्छे उतारे र भाषण गरे प्रचण्ड र माधव खत्तम हुन् । वास्तविक नेता त ओली हुन् । सर्वसाधारणले सुने ताली बजाए । सर्वसाधारणको तालीको महत्व थियो । टाउकोको संख्या महत्व थियो । त्यहि भएर घरघर पुगेर बसले लिएर काठमाडौँ ल्याएको थियो ।
गत वर्ष लगभग यहि समयमा कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर चल्यो । श्रमिक, मजदुर, सर्वहारा खोइ के – के नाम दिएर तिनीहरुले राजनीति गर्थे । ति काठमाडौँमै थिए । ज्यालादारी गर्थे, दिनभरी मजदुरी गरेर हातमुख जोर्थे । लकडाउन घोषणा भयो । एकदुई हप्ता त जेनतेन चल्यो । त्यसपछि चुलो बल्न छोड्यो । डेरामा चुल्हो बल्न छोडेपछि गाउँ फर्किनेको ओईरो लाग्यो । नागढुंगाबाट प्रहरीको आँखा छलेर अघि बढेका कदम रोल्पादेखि ताप्लेजुङ्गसम्मका थिए । साना केटाकेटी पिठ्युमा बोकेर ४-५ दिन भोक प्यास केही नभनी आफ्नो थाँतथलो फर्किए । केही समाजसेवीले बाटोमै खानेकुरा र पानी राखिदिएका थिए र ति बाँचेर घर पुगे ।
परिस्थिति लगभग पुरानै विन्दुमा आइपुगेको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर अलि कडा छ । संक्रमण डर तीव्र छ । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । काठमाडौँ छोड्न चाहनेलाई २ दिन समय दिइएको थियो तर त्यो दुई दिनमा काम गर्ने कि फर्किने ? फर्किए पनि बसको टिकट पाइन्छ ? बसपार्कबाट टिकट नपाएर फर्किनेको लर्को थियो । निषेधाज्ञा सुरु भएको दोस्रो दिनसम्म पनि कलंकीमा अझै घर फर्किन गाडी कुरिरहेका यात्रु भेटिन्छन् ।
कहाँ गए ती आमसभामा मान्छे भर्न ल्याउने डिलक्स र एसी बसहरु ? जब एउटा गुट विरुद्ध अर्को गुटले शक्ति देखाउनु थियो, घरै पुगेर श्रमिक, मजदुरहरु ओसारिएका थिए । जब श्रमिक र मजदुरहरु संकटमा पर्छन् अचानक कता लुक्छन् ती डिलक्स र एसी बसहरु ? निषेधाज्ञाको कारण दैनिक मजदुरी गर्नेहरुको रोजीरोटी गुमेको छ । साना व्यवसायीहरु भाडा तिर्न नसकेर हैरान भएका छन् । बिरामीहरु अक्सिजन नपाएर छटपटाउँदै मर्नुपर्ने अवस्था छ तर सत्तावृत्तमा रहेका कपूतन्त्रका मतियारहरुको गतिविधि हेर्दा लाग्दैन यिनीहरुलाई लाग्दैन यिनीहरु सर्वसाधारणको मर्काप्रति संवेदनशील छन् । सरकार ढाल्ने कि राख्ने भन्ने हिसाबकिताब गरेरै दिन बित्ने गरेको छ । कतै सांसदद्वारा फ्लोर क्रस, कतै बिरामी नभई सांसद आईसीयुमा भर्ना, कतै सांसद अपहरणमा परेको उजुरी ।
परिक्षणको कुन कसीलाई हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौं ? विगत २००७ सालदेखि यिनै छन् र यस्तै गरिरहेका छन् । तैपनि हामी चेतेका छैनौं । सांसद किनबेच, सुरासुन्दरी काण्ड, सांसद अपहरण, गुण्डालाई मन्त्री, भ्रष्टलाई संरक्षण त यिनीहरुले पहिल्यैदेखि गर्दै आएका थिए । हामीले किन यिनलाई पाखा लगाउन सकेनौं ? कुन समयको प्रतीक्षा गर्दैछौं ? आफै मृत्युको मुखमा पुगेपछि बल्ल चेत्छु भनेर कुर्दा अलि ढिला हुन्छ कि ?
कोभिडले बिगारेको मनको मर्मत
राज्यराष्ट्र सिद्धान्त नै एकमात्र समाधान
घृणा फैलाउनेलाई सहृदयता दर्शनले रोकौं
‘साना व्यवसायीको भाडा तिर्न कोष खडा गरियोस्’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यसरी योगदान पुर्याउन सक्छन्
प्रधानमन्त्रीले पाएनन् विश्वासको मत
जनताको चासो समिकरण होइन, भेन्टिलेटर – मौलिक जरोकिलो पार्टी
विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथी विश्वविद्यालयको खेलवाड
दुर्गम क्षेत्रको भेन्टिलेटर फिर्ता लैजानु अन्यायपूर्ण निर्णय –…